Ederson Moraes Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography'
Home SOUTH AMERICA FOOTBALL CORRADA Ciyaartoyda Kubadda Cagta ee Brazil Ederson Moraes Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography'
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada Full of Stopper gool oo si fiican ugu caansan magaca Nickname; "Dhagaxa Brick". Our Edison Moraes Storyhood iyo akhbaar aan ku qorneyn xaqiiqooyinka waxay kuu keenaysaa xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la arki karo wakhtiga carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqayntu waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor warkeeda, nolosha qoyska iyo xaqiiqooyin badan oo ka baxsan isaga.
Haa, qof kastaa wuu ogyahay inuu gool udoonayo goolka, lakiin wax yar ayaa ka fakaraya Edison Moraes 'Bio kaas oo ah mid xiiso leh. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, aynu bilaabi.
Ederson Moraes Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka looyaqaan -Nolosha Hore
Ederson Santana de Moraes wuxuu ku dhashay maalintii 17th ee August 1993 ee Osasco, São Paulo, Brazil. Ederson's barbaarinta waxay ahayd mid aad u adag xagga dhaqaalaha Brazil. Waxa uu ku dhashay waalidiinta saboolka ah ee aan awoodin in la siiyo laakiin kubada loo oggol yahay inay noqoto tan ugu dambeysa.
Xaqiiqdii xilligii uu jiray caruur, qof waliba oo uu ku jiro tababarkiisa had iyo jeer wuxuu u yeeray "Bull". Tani waa sababta oo ah kubada cagta ayaa had iyo jeer ahaa rag mugdi gaduud ah oo da 'yarta ahna Ederson ayaa horumariyay awoodda ay ku iibsan karaan raggiisa.
Mucjisadiisa ayaa yimid markii uu mar kubadda ku toogtay meel fog oo aan caadi aheyn oo uu ku dhuftay laad xor ah, taasoo dhalisay gool uu ka dhaliyay xiddigihiisa heerka dhalinyarada. Kusoo kordhin kartid awooda uu ku leeyahay weeraryahanada, wicitaan ka yimid Europe ayaa u mahadceliyay gooldhaliyeyaasha Benfica kuwaas oo soo bandhigay xiiso aad u sarreeya goolhaye da 'yar. Edward Edward Ederson, wuxuu ku biiray Atlantic oo ku biiray Benfica, isagoo ku biiray kooxda da 'yarta ee Lisbon. Waxa uu dareemay mid aad u raaxeysanaya ciyaartoyda reer Brazil sida agagaarkiisa.
Fasaxiisa weyn ee Yurub wuxuu ku qaatay waqtigiisii. Waqti yar ka dib, Ederson ayaa loo ogolaaday inuu ka tago Ribeirao ka dib labo sano oo uu la joogay kooxda heerka hoose ee Primeira Liga. Naadiga, wuxuu noqday kan ugu fiican, waxaana sii dheer inuu u ciyaaro Rio Ave. Waqti uma qaadin ka hor inta uusan Benfica mar kale xiiseyneynin.
Wuxuu ku bilowday kooxdiisii ​​'B' ee kooxda waxaana loo xaqiijiyay inuu yahay lambar ku filan. Ederson ayaa ka garab ciyaari jiray kooxda cusub ee Bernardo Silva oo ku biiray heerka dhexe ee Benfica. Ederson ayaa wajahay caqabado badan marka uu tago kooxda weyn. Dhibaatadii ugu weynayd ayaa aheyd joogitaanka ciyaaryahanka Julio Cesar, goolhayaha halyeeyada leh, oo u dhexeeya jagooyinka.
Ciyaaryahankii hore ee Inter Milan ayaa runtii muujiyay 2015, isagoo qandaraaska u kordhiyay 2018. Si kastaba ha ahaatee, markii fursadii Ederson uu yimid wuxuu qaatay. Cesar wuxuu bilaabay inuu shaqadiisa u dhiibo qofka da 'yarta ah tan iyo markaas.
Inkastoo uu yar yahay, Ederson ayaa ku riyaaqay guulo badan, isagoo ku guuleystay Primeira Liga labo jeer. Markii la soo dhaafay, kooxdiisii ​​ayaa ku guuleysatay markii ay garaacday Zenit St Petersburg tartanka Champions League. Kulankan caawa ee wareega quarter-finalka ee Bayern Munich ayaa waxaa ku soo dhamaaday barbaro 1-1 ah Pep Guardiola. Ederson ayaa wajahay macalinka mustaqbalka Pep Guardiola maadaama Benfica ay lumisay labo lugood iyadoo goolhaye uu si fiican u ciyaarayay. Tani way gubatay Pep's jacaylka isaga. Inta kale, sida ay yiraahdaan, hadda waa taariikh.
Ederson Moraes Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka looyaqaan -Nolosha Xiriirka
Ederson Moraes xaaskiisa ayaa gabi ahaanba la yaab leh. U fiirso quruxda Lais Moraes, gabadha quruxda leh.
Waxay isguursadaan muddo afar sano ah waxaana labadooduba haystaan ​​gabadoodii koowaad ee loo yaqaan 'Yasmin'. Marka Ederson wuxuu ku biiray Man City, qof walbaba si dhab ah uma siin. Waxa uu ahaa xaaskiisa gabadha ah ee Lais kuwaas oo taageerayaasha indhaha ku haya. Labada saaxiibba waxay si joogta ah ugu diraan bogga Instagram ee xiriirkooda.
Beautiful Lias Moraes si joogta ah ayaa loo arkaa in ay saldhig u tahay ninkeeda.
Ederson Moraes Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka looyaqaan -Naftaada Shaqsiga
Ederson Maraes wuxuu leeyahay astaamaha soo socda ee shakhsiyadiisa.
Ederson Maraes Xoogagga: Isagu waa hal-abuurnimo, dabacsanaan, deeqsinimo leh, oo diirran, faraxsan, dabcan, dabacsanaan.
Ederson Maraes Zakada: Wuxuu noqon karaa mid xishood badan, kibir badan oo madax adag leh.
Maxaa Ederson Maraes jecel yahay: Run ahaantii, wuxuu jecel yahay in uu taageero maaliyadeed siiyo dadka baahan, masraxi, fasaxyo, iyo la saaxiibo saaxiibo
Maxaa Ederson Maraes Jecelahay: wuu necebyahay in la iska indho tiray, oo uu wajahayo xaqiiqo adag.
Marka la eego, Ederson waa riwaayad, hal-abuurnimo, is-kalsooni, madax-bannaan oo leh qof aad u adag inuu iska caabbiyo. Iska kaashka garoonka, waa mid aad u xishood badan, laakiin gudahiisuna waa sida libaaxyo badan oo gaajo leh. Waa qof awood u leh in uu gaaro wax kasta oo uu doonayo inuu ku noolaado meel kasta oo noloshiisa ah.
Ederson Moraes Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka looyaqaan -tattoo
Ederson wuxuu leeyahay tattoos-ka 34 isaga oo ku jira jidhkiisa. Sheekooyinkaasi waxay leeyihiin macnooyin kala duwan, laga soo bilaabo asalkiisa diinta kiristaanka ah, ficilkiisa kubada cagta iyo qoyskiisa oo ku soo laabanaya Brazil.
Isagoo ka bilaabaya qoortiisa, Ederson waxa uu hayaa xeelad jilicsan oo ku wareegsan tufaaxiisa Adam kaas oo u eg inuu jilicsan yahay isagoo jilicsan soo jiidanaya gadaashiisa.
On laabtiisa soo bandhigo iimaanka Christian. Ederson waxay haysataa qoollo kor u dhaafaya ereyga "Anigu waxaan ku tiirsanahay Ciise" Wuxuu ku dhejiyaa silsilad iskutallaab ah si uu u sii adkaysto rumaysadka Masiixiyadda.
Lugta koowaad waa lugta koowaad ee horyaalka Portugal, isagoo kula guuleystay Benfica 2015.
Ederson Moraes Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka looyaqaan -Kulanka
Ederson wuxuu sameeyaa 2.42 kaydiyaa cayaar kasta, marka loo eego Claudio Bravo 1.44, David De Gea 1.81 iyo Thibaut Courtois ' 1.52. Mid ka mid ah kaydka noocaas ah waxaa ka mid ah isaga oo jimicsiga xoogga u saaran iyo inuu xirfadiisa ku dhajiyo xariiqda hoos ku sawiran.
Sawirka hoose wuxuu muujinayaa ka dib markii uu la kulmay Sadio Mane.
Ederson Moraes Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka looyaqaan -Nolosha Qoyska
Isagoo la hadlaya hooyadiis, aabihiis, walaalo iyo walaalo ay yaqaanaan Ederson, sawir nuxur leh oo niyadjir leh, ayaa ka soo baxa. Barbaarnimadu waxay ahayd mid aad u adag laakiin waalidkiis waxay keeneen qiyamka iyo anshaxa. Ederson wuxuu ka soo jeedaa qoys ka mid ah diinta masiixiga ee xoogan.
Hal shay oo ka mid ah qoyskiisa waa deeqsinimo. Ederson qudheeda ayaa mar uun ku soo biiray naadiga 10,000 kooxdiisii ​​hore ee Osasco si uu uga caawiyo inuu cadeeyo deynta.
Ederson Moraes Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka looyaqaan -Awoodda Xirfadaha
Shaki la'aan, Ederson waa mid deg deg ah, geesinimo leh, niyadjab leh, iyo kalsooni jir ahaaneed. Ederson waxay leedahay awood jireed, dib-u-eegis heer sare ah iyo awoodda gabbasho ee weyn.
Wuxuu horumariyay sumcad isagoo ah khabiir ku takhasusay rigoorada intii lagu jiray waqtigiisii ​​Benfica. Si kastaba ha ahaatee, waa mid aad u qiimeeynaya qeybintiisa wacan iyo xirfad leh kubada cagta. Xakameyntan iyo kalsoonida kubada ee kubada ayaa awood u leh inuu heysto hantida isla markaana si dhakhso ah kubbadda uga ciyaaro dhabarka dhulka hoostiisa ama gacmihiisa - xataa marka cadaadiska la saaro. Inkastoo uu da 'yar yahay, wuxuu mar hore u istaagay go'aankiisa, isku dheelitirnaanta, iyo gooldhalinta goolka, iyo sidoo kale awooda uu u leeyahay inuu difaaco difaaciisa.
Hubinta FACT Waad ku mahadsantihiin akhrinta Edison Moraes Storyhood iyo sheekooyinka taariikhda aan la sheegin. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan ku habboonayn qodobkan, fadlan ku qor faalladaada ama nala soo xiriir!.
Thiago Silva Sheeko dheeraad ah Xogta Warka Xadida
Lucas Moura Storyhood Plus Sheekooyinka Xaqiiqooyinka aan la isku qorin
Roberto Firmino Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir la'aanta